La wadaag Google Music Library Ka mid ah Android Phones y
> Resource > Music > Share Google Music Library Ka mid ah Android Phones
Sharci (ee gobolka kasta US, waxaan qabaa) nimankooda iyo naagaha hantida guud ahaan gaar ah "ee guud ahaanteed ah," in dhab ahaan ka codsan lahaa in uu music Google. Laakiin Google ma bixisaa qaab fudud oo ay ku wadaagaan maktabadda Google Music. Halkan waa xal u la xaaskaaga (iyo caruurta haddii loo baahdo) wadaagaan maktabadda Google Music, mar kale aan geliyaan aad ururinta si account Google Music.
Ka soo qaad in aad leedahay geliyaan aad music ururinta in Google Music la xisaabtaada Google. Hadda inay raacaan talaabooyinkan si ay u wadaagaan maktabadda Google Music in qofka aad is qabtaan Android phone . Halkan qaadataa HTC Cajiib ah tusaale ahaan. Waxaa laga yaabaa inay wax yar ka duwan ee aad taleefan.
Calan Google Music Library on Android Phones
1. telefoonka qofka aad is qabtaan , hubi in aan in weli rakibi app android, haddii aad horey u rakibay, uninstall.
2. telefoonka ee shaashadda guriga, ku dhacay Menu, markaas Settings, markaas Accounts & nidaameed.
3. Tubada dar xisaabta.
4. Dooro Google, ka jaftaa Next, Haddaba calaamadee in la AAD Google account iyo password .
5. Waxay ku heli doonaa xisaabtaada oo aad rabto inaad bilowdo syncing wax kasta (Xiriirada, Gmail, Calendar, iwm)
6. Uncheck wax kasta oo uu isku dayay in uu u hagaagsan.
7. Tag Android Market iyo download app Android Music oo ku xidh.
8. baxsad app Google Music telefoonka Android ka dibna riix Menu, markaas Settings, markaas fursad u sareeya waa Google Account. Riix in ay tahay in aad qabto doorashada si ay u doortaan labada iyada Google account ama adiga iyo
9. Dooro aad xisaabta, waxaa bilaabi doonaan in ay u hagaagsan, ka dibna aad music waxaa laga heli karaa iyada / isaga oo telefoon Android!
Google Music Library Notes
1. Waxaa dhici karta in aad si dhab ah u shaqeeyaan qaadato inta for this. Hadii ay jirto wax aan u Menu > Settings . Uninstall iyo soo dajiyo app u leedahay in isku day ah.
2. xal ma u san yahay. Dhici karta in aanad karayn inuu dhagaysto ururinta isla waqti isku mid ah.
3. Eeg sida ay u soo bixi maktabadda Google Music in computer.